महिनावारी कप, किन पर्दैछ सहरिया महिलाको रोजाईमा ? – WASHKhabar
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार ०७:४८ 4451 पटक हेरिएको
काठमाडौ : काठमाडौं महानगरपालिका ३१ नयाँ बानेश्वरकी सम्झना बानियाँले महिनावारी भएको समयमा स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्न छोडिसक्नुभएको छ । उहाँले दुई बर्ष यता महिनावारी कप प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । बानियाँ भन्नुहुन्छ ‘प्याड जसरी बेला बेलामा किनिरहनु नपर्ने, फेरिरहनु नपर्ने भएकाले मलाई त यही सजिलो लाग्यो । ’
महानगर १५ स्वयम्भुकी प्रमिला महर्जन पनि महिनावारी कप नै प्रयोग गर्नुहुन्छ । गाउँघरमा गईरहनु पर्ने हुँदा स्यानिटरी प्याड किन्न नपाईने ठाउँमा महिनावारी कप झनै प्रभावकारी हुने उहाँको अनुभव छ । प्रमिला भन्नुहुन्छ ‘हामी जस्तो सामाजिक काममा घर बाहिर निस्किरहनु पर्ने महिलाले ब्याग भित्र स्यानिटरी प्याड जोहो गरेर बोकिरहनु भन्दा महिनावारी कप बोक्यो हिड्यो ।’
याद राख्नुहोस् पहिलो पटक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने ६ घण्टापछि निकालेर कति रगत भरियो भनेर जाँच गर्नुपर्छ । यसले कति समयसम्म राख्दा कति भरिन्छ भन्ने एकीन गर्न सजिलो हुन्छ ।
सारीको टालो वा कपडाको टुक्रा प्रयोग गरेर जीवन कटाएका हजुरआमा र आमाहरुलाई यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर सहरीया र पढे लेखेका महिलाले महिनावारी कपलाई आफ्नो रोजाई बनाउन थालेका छन् । शहरीया र शिक्षित महिला माझ महिनावारी कपले बजार जमाउन थालिसकेको छ । महिनावारी शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको डेज फर गर्ल्सकी निर्देशक माया खैतु भन्नुहुन्छ ‘हामीले दुई महिनाकै अवधिमा ५ सय थान विक्री गरिसक्यौं, अहिले त महिनावारी कप सफा गर्ने महिनावारी वासिङ कप समेत पाईने भएकाले सजिलो भएको छ ।’
के हो महिनावारी (Menstrual Cup) कप ?
महिनावारी कप, हेर्दा कप जस्तै देखिने १०० प्रतिशत उच्च गुणस्तरीय मेडिकल ग्रेड सिलिकनले बनेको हुन्छ । यो एक पटक किनेपछि १२ बर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाएको हुन्छ । यो विभिन्न रङ र आकारमा किन्न पाईने मेरी स्टोप्स्की निसा राउतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार महिनावारी कप स्यानिटरी प्याड भन्दा धेरै गुणा फाइदाजनक भएकाले विशेष सहरीया महिलाको रोजाईमा पर्दै गएको छ ।
सहरीया महिलाको रोजाईमा पर्नुका कारण
महिनावारी कप नियमित प्रयोग गर्ने महिलाहरु भन्छन् ‘यो प्रयोग गर्दा अति सजिलो हुन्छ । प्याड लगाउँदा बाहिर नै आकार देखिन्छ । तर कप योनी भित्र राख्ने भएकाले अरु मानिसलाई थाहा नै हुँदैन र असजिलो पनि हुँदैन ।’
आर्थिक रुपमा किफायती
नयाँ बानेश्वरकी सम्झना बानियाँ यो सुरुमा किन्दा निक्कै महँगो लागेपनि तुलनात्मक रुपमा स्यानिटरी प्याड भन्दा निक्कै सस्तो हुने बताउनुहुन्छ । ‘एक पटकको महिनावारी चक्रमा करिब २ सय सय रुपैयाँ प्याडमा मात्र खर्च हुन्छ । यो हिसाबले एक बर्षमा त २ हजार भन्दा बढी खर्च हुन्छ । यो हिसाबले १० बर्षमा २० हजार बढी खर्च हुन्छ । तर २ हजारमा किनेको महिनावारी कपबाट १० बर्षसम्म प्रयोग गर्दा करिब २० सै हजार रुपैयाँ बचाउन सक्छौं ।’
हेर्नुहोस् त स्यानिटरी प्याड प्रयोग गरेर जहाँ पायो त्यही फाल्नाले वातावरण विग्रिरहेको छ । शौचालयमा फ्याँक्दा शौचालय जाम भएर अर्को टेन्सन । कहिलेकाहीं कुकुरले बोकेर बजार बजारमा कुदिरहेको हुन्छ, कस्तो अशोभनिय । यसले वातावरणलाई नराम्रो असर पारिरहेको छ । महिनावारी कप प्रयोगकर्ताहरु भन्छन् ‘महिनावारी कपको प्रयोगले वातावरणमा त्यस्तो रगतजन्य प्याडहरुको अन्त्य हुन्छ । एक पटक किनेपछि यो १० बर्षसम्म त फ्याँक्नै पर्दैन।’
महिनावारी कप प्याडको तुलनामा अति स्वस्थकर भएको यसका बजार प्रबद्र्धकहरु बताउँछन् । प्याड लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा यसैका कारण विभिन्न संक्रमणहरु हुन सक्छ । कतिपय प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या स्यानिटरी प्याडकै कारण उत्पन्न हुने गरेको डाक्टहरु बताउँछन् । तर महिनावारी कप १०० प्रतिशत उच्च गुणस्तरीय मेडिकल ग्रेड सिलिकनले बन्ने भएकाले शरिरमा छुँदा एलर्जी आउने वा अरु रासयनिक कारणले समस्या आउने हुँदैन ।
नेपालमा मेरी स्टोप्स, पुतली नेपाल, डेज फर गर्ल्स लगायत थुप्रै संघसंस्थाले महिनावारी कपको बजारीकरण गर्दै आएको छ ।